Kolanyo Gaadiid Saanad Milateri Xambaarsan oo Xalay Guurre-gal ku Maray Hargeysa | Duul News International
Kolanyo Gaadiid Saanad Milateri Xambaarsan oo Xalay Guurre-gal ku Maray Hargeysa	Hargeysa(Duulnews.com/Yool)-Waxa xalay Magaalada Hargeysa abaaro 11:00 Caweysnimo, guure-gal ku maray Kolanyo Gaadiid ah oo sida Xamuul isugu jira Koontiinaro iyo Gaadiid nooca Milateriga ah. Gaadiidkaasoo ka yimi Dhinaca Magaalada Berbera, ayaa sida muuqatay Shixnada ka soo qaaday Dekedda halkaasoo laga soo dejiyey.
Gaadiidka Xambaarsanaa Shixnada Saanada Milteri ku jirto oo tiradoodu ka badnayd intii Isha Wariyeyaasha Wargeyska Yool qabatay shan iyo Toban Baabuur oo nooca Inatareyga loo yaqaano ah, ayaa dhamaantood waxa ku xidhnayd Taarikada ama Calaamada waddo-marista ee waddanka Itoobiya.
Gadhaawida qaar, ayaa waxay xambaarsanaayeen laba laba Konteenar, halka kuwa kalena ay sideen Gaadiid Ciidan oo ay ku jiraan Baabuurta qafilan ee Dagaalka, kuwaasoo aanay waxba ku dahaadhnayn iyaga (xidhnayn ee toos loo arkayey). Waxaana guuxaha iyo bullaanka socodkooda laga dareemayey hareeraha wadada ay ku safrayeen oo ah Laamiga hor-mara Madaxtooyada.
Ma jiraan ilaa hada Tafaasiil ka soo baxday Xukuumaddaha Somaliland iyo Itoobiya oo ku saabsan cida leh, meesha lagu waday iyo halka laga keenay Saanada Milateri ee sida raashinka looga soo daabuley Magaalada Berbera, isla markaana sida ka muuqatayTooraha Baabuurtii siday loo waday dhanka Itoobiya. Hase-ahaatee arrintan ayaa soo shaac-baxday iyadoo todobaadkanba la hadal hayay in Dekedda Berbera laga soo dejiyey saanad Milateri oo ay leeyihiin Ciidamada AMISOM ee howl-galka nabad ilaalinta u jooga Dalka Soomaaliya. Sida xogo wargeyska Yool helay arrintaasi tibaaxayeen Hubka Amisom kala soo degtay Dekedda Berbera, ayaa qorshuhu yahay in loo gudbiyo dhanka Koonfurta Soomaaliya.
Si kastaba ahaatee, ilo-wareedyo Diblomaasiyaddeed oo kale ayaa tibaaxay inay Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo u ogolaatay Itoobiya inay Dekedda Berbera kala soo degto saanadan Milateri, laakiinse wali xukuumaddu afkeeda marna may soo marin.
Wariyeyaash Wargeyska Yool, ayaa fursad u helay inay Sawirro ka qaadaan Gaadiidka saanada Milateri xambaarsanaa ee Magaalada Hargeysa Guuraha ku dhaafay.